तिजमा घाम लाग्छ कि पानी पर्छ ? यस्ताे भन्छन् माैसमविद् - Abhiyan news
२२ भाद्र २०७८, मंगलवार ०३:०८ अभियान न्यूजLeaveaComment on तिजमा घाम लाग्छ कि पानी पर्छ ? यस्ताे भन्छन् माैसमविद्
अर्काे चिन्ता छ- आइतबार साँझबाट मौसम प्रतिकूल बनेपछि यो पटकको तिज पनि हिलाेमय हुने त होइन ? आइतबार रातिकोजस्तो ठूलो वर्षा नभए पनि सोमबार राति पानी परेको छ । मंगलबार बिहान काठमाडौंसहितको आकाशमा बादल लागेको छ- प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।
बालेनले कटाए १० हजार मत
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०२:४३ अभियान न्यूज
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च : पेट्रोल प्रतिलिटर १४२
१९ माघ २०७८, बुधबार ०२:३४ अभियान न्यूज